सावधानः मधेशीसँग यसरी हुनेछ धोका (विचार)- प्रतिक राजवीर
गृहपृष्ठसमाचारअर्थअन्तर्राष्ट्रियखेलकुदमनोरन्जनअन्तरवार्तासमाजफोटो फिचरसम्पर्क	You are here: Homeमनोरन्जनमनोरन्जनसावधानः मधेशीसँग यसरी हुनेछ धोका (विचार)- प्रतिक राजवीर
Sunday, 07 May 2017 14:38	Rate this item
चुनाव फेरी आयो । मधेशकेन्द्रित दलहरुको मनोकुल संविधान संशोधन भए पनि नभए पनि चुनाव हुन्छ नै । ‘मधेशी अनुहार’हरुकै काँधमा बन्दुक राखेर त्यो चुनाव हुन्छ । त्यसका लागि चाहे त्यो बन्दुकपड्काउनु परोस कि त्यो बन्दुक देखाएर डराउनु मात्र परोस् । चुनाव हुन्छ र गराईन्छ नै । ‘व्यक्ती केन्द्रित’ राजनीति र ‘विकाउ’ बुद्धिजीवि भएको देशमा यो भन्दा बढीको अपेक्षा पनि गर्न सकिन्न ।
सबैको मुखमा अहिले एउटै कुरा छ,– चुनाव आए पछि अब के हुन्छ ? वास्तवमा केहि हुँदैन । महेन्द्रले ‘कू’ गरे, के भयो ? बिपीले प्रजातन्त्र ल्यायो, के भयो ? मओवादीहरु ‘महान जनयुद्ध’ गरे के भयो ? संविधान निर्माण भयो तर केहि भएन । मधेशीहरु छ महिनासम्म आन्दोलन गरे, त्यै पनि केहि भएन । अहिले चुनाव हुँदै गर्दा के हुन्छ ? फेरी पनि केहि हुँदैन । किनकी केहि नहुने हाम्रो नियति हो ।
जे भए पनि जस्तो भए पनि एउटै वर्ग, एउटै समुदाय, एउटै जात र एउटै लिङ्गको हालीमुहाली रहिरहनेछ । त्यसका लागि ‘सम्बल’ दिने र आफ्नै भाई–बन्धुलाई ठोक्न पछि नपर्ने केहि ‘विभिषण’हरु उनीहरुसंगै छन् । त्यतिकै उनीहरुले देशमाथि कब्जा गरेका छैनन् । त्यसका लागि सबै समुदायबाट ‘राजनीतिक कमैया’ राखिएकै हो । र ती कमैयाहरुले कहिले लोकमानको नाउँमा त कहिले सुशीला कार्कीको नाउमा ‘परिवर्तन’का मुद्दाहरुलाई अल्झाई राख्न मञ्चन गरिने नाटकहरुमा कहिले अभिनेता त कहिले चरित्र अभिनेता भएर देखा पर्ने नै छन् ।
अब चुनाव आउँदा उनीहरु फेरी देशाटन गर्नेछन् । तपाईको घरमा आउने छन् । तपाईको नाममा ‘काका–भैया’ जोडे सम्बोधन गर्नेछन् । उनीहरुले तपाईका ‘मरेका आफन्त’हरुको नाउँमा ‘आँशु’ पनि बगाउने छन् । तपाईका सुख दःखका ‘साथी’ हो भनेर विश्वास दिलाउने छन् । तपाई विश्वस्त बन्नु हुनेछ । उसले तपाईको ‘शहीद’को शालीक बनाउने र उसलाई शहीद घोषणा गराउने भाषण पनि गर्नेछन् । तपाईलाई क्षतिपुर्ति दिलाउने ‘वाचा’ पनि गर्ने छन् । अन्तमा, तपाईको आफन्त हत्याको दोष उनै ‘निरीह’ आन्दोलनकारीहरुलाई लगाउने छन् । तपाई पगल्नु हुन्छ । फेरी चिप्लिनु हुन्छ । उनी फेरी जित्छन र तपाईको मतकै आधारमा मालिकको खास ‘चाकर’मा पदोन्नती पाउँछन् ।
अनि विद्रोह गर्नु हुन्छ । सडकमा महिनो टायर जल्छ । दर्जनौको बलि दिईनेछ । ‘विदेशी दलाल’को तक्मा पाउनु हुनेछ । ‘मोदी’को छोरा कहलिनु हुन्छ । तपाई भित्रैका ‘विभिषण’हरु फेरी जागृत हुनेछ । तपाईलाई फेरी उसले सात पुस्ता गाली गर्नेछन् । आन्दोलन सम्झौतामा टुङ्गिनेछ । फेरी चुनाव हुन्छ । फेरी मुद्दा विसर्जन । फेरी उनी तपाईको घर आउनेछ ।
उनी फेरी आउँछन् । आफ्नो पुर्खाको ‘गौरब–गाथा’ सुनाउँछन् । देशको लागि, मधेशको लागि जेल–नेल गएको सुनाउँछन् । उनै क्रान्तिकारीको छोरा नाती हो त्यसैले उनै जस्तै सम्मान गर्न अप्रत्यक्ष याचना गर्छन । उनका ‘दलाल’हरु आउँछन् । गाउँको ईज्जत जोगाई दिन अमुकलाई नै भोट दिन मनमनाउ गर्छन् । तपाईको छोरा–बुहारीलाई जागिर लगाई दिने आश्वासन पनि दिन्छ । तपाई सम्झिनु हुन्छ उनका पुर्खाले तपाईमाथि गरेको ‘उपकार’ र बन्नु हुन्छ ‘नोस्टाल्जिक’ । बाउ–दादाको कर्मको ब्याज छोरा–नातिलाई दिनु हुन्छ । उसले असुल्छन् तपाईसँग साहुकारी ब्याज पुस्तौं सम्म, हरुवा–चरुवा, मुक्त कमैया र कम्लरीजस्तै ।
उनी फेरी आउँछन् । तपाईजस्तै कपडा लगाएर, तपाईकै आँगनमा, भुँईमै बस्छन् । अनि बोल्छन् तपाईकै बोलीमा । तपाईका सुख–दुःखका कथा÷ब्यथा सुन्छन् । तपाई जस्तै आफुलाई पनि भन्छन् । हिजोसम्म तपाईका सात पुस्तालाई सराप्ने उनी आज तपाईको चौधपुस्ताको बखान गर्छन । तपाईलाई सम्झाउँछन्,– कसरी तपाईका बाबा–पुर्खा उनकै पार्टीमा लागेका थिए । कसरी उनीहरु रात दिन नबुझि पार्टीको काममा खटिन्थे । कसरी पार्टी संगठन बनाउन जेल–नेल बसेका थिए । कसरी निर्वासित हुन बाध्य भएका थिए । ती सबैको दोष उनीहरुले जहाँनीया राणा र निरंकुश राजतन्त्रलाई दिन्छन् । आफु चोखिन्छन् । तपाईलाई भ्रमित बनाउँछ र तपाईकै मत लिएर तपाई माथिनै ‘शासन’ गर्छन् ।
अनि, उनी फेरी आउँछन् । तपाईलाई रक्सिको बोलत र साडि दिन्छन् । बच्चाको कपडा र खेलौना पनि दिन्छन् । पशुपति घुमाउने बचन दिन्छन् । तपाईकै थालको सुख्खा रोटी ‘स्वाद मानेर’ खान्छन् । हप्तौसम्म गाउँमा भोज चल्छ । दिनको १० पटक नमस्कार ठोक्नेछ । २० पटक हालखबर सोध्नेछ । र ४० पटक मत माग्नेछ । तपाई फेरी पग्लिनु हुनेछ । रक्सिको नशामा तपाईको हात त्यहि चिन्हमा गएर ठोक्किन्छ, जुन चिन्हअंकित झण्डामा तपाई ‘सितन’ बोकेर घर आउनु भएको हुन्छ ।
अरु सिप न लागेपछि, उनी अन्तमा बिद्रुप रुपमा आउनेछ । बन्दुक, भाला, खुकुरीवालहरु तपाईको घरमा पस्नेछ । बुटको ‘ठक–ठक’ले तपाई रात भरि निदाउन सक्नु हुन्न । बच्चालाई रातभरि छातिमा टाँसेर कयौै रात बस्नु पर्दा तपाई गल्नु हुन्छ । पुलिस पनि उसकै, हतियार पनि उसकै । पत्र पनि उसकै पत्रकार पनि उसकै । राज्य पनि उसकै, सरकार पनि उसकै । तपाईको आँखा अगाडी अन्धकार छाउनेछ । एकातिर सिद्धान्त र अर्को तिर सन्तान, तपाई निस्सासिनु हुनेछ । अन्तमा सन्तानको लागि सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर त्यहि चिन्हमा मत हाल्नु हुन्छ जुन तपाईको छातिमा क्रुरतापुर्व तर नदेखिने गरि सधैंको लागि छापिएको हुनेछ ।
हो, चुनाव आउँदैछ । र के हुन्छ ? केहि हुँदैन । चुनाव आउँदा केहि हुँदैन । उही दलाल फेरी जित्छन् । साम–दाम–दण्ड– भेद जे लगाएर पनि जित्ने उनै हुन् ।
उनी पछि भने धेरै थोक हुन्छ । तपाईलाई ‘प्रतिनिधित्व’ गर्न जानेहरु ‘नवराजा’ बन्नेछ । तपाईमाथि शासन गर्नेछन् । उनका छोरा–छोरी विदेशी स्कुलमा पढ्नेछन् । उनको औषधोपचार विदेशी हस्पीटलमा हुनेछन् । मोटरसाईकलको ठाउँमा ‘कार’ हुनेछ । कुर्तामाथि ‘कोट’ सजिनेछ । यहि हुँदै आएको छ । यहि हुनेछ ।
तपाई फेरी ‘वाक्क–दिक्क’ बन्नु हुन्छ । फेरी निस्सासिन थाल्नु हुनेछ । अनि विद्रोह गर्नु हुन्छ । सडकमा महिनो टायर जल्छ । दर्जनौको बलि दिईनेछ । ‘विदेशी दलाल’को तक्मा पाउनु हुनेछ । ‘मोदी’को छोरा कहलिनु हुन्छ । तपाई भित्रैका ‘विभिषण’हरु फेरी जागृत हुनेछ । तपाईलाई फेरी उसले सात पुस्ता गाली गर्नेछन् । आन्दोलन सम्झौतामा टुङ्गिनेछ । फेरी चुनाव हुन्छ । फेरी मुद्दा विसर्जन । फेरी उनी तपाईको घर आउनेछ ।आखिर ‘सुख र समृद्धि’ सपना न हो । र सपना त सपनानै हो ।
यही हुनेछ । यस्तै हुनेछ । यस्तै हुदै रह्नेछ ।	Read 517 times	Last modified on Wednesday, 10 May 2017 15:38	Tweet
« राष्ट्रपति निर्वाचनः मधेसी मोर्चाका ४२ सांसदले भोट नहाल्ने, साना पाँच दलको भोट गुरुङलाई पेट्रोलको तस्करीमा प्रहरी भ्यानको प्रयोग ! »